Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဖိုးစိန် ရဲ့ ညည်းချင်း
Writer Sein Lyan Time 1:20 am
မဖတ်ရသေးဘူး ။ နေရာဦးတာ ပထမဆုံးနံပါတ်တစ်နော့် ။
“မငိုပါနဲ့ မိန်းမရာ မင်းသားက ယောကျာ်းပါ… ယောက်ျားဆိုတာ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ နေတတ်ရမယ်… ငါတို့ကျွေးထားတာကို သူပြန်သိတတ်တာ ဒါကြောင့် ငါမျက်ရည်မကျဘူး”
တစ်ကယ်ကိုခံစားရပါတရ် ။ မျက်ရည်မကျဘူး ။ ငါဘယ်တော့မှမျက်ရည်မကျဘူးတဲ့ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီလွှဲပေးလိုက်ပြီ ။ ရှိသမျှပိုက်ဆံအကုန်ပေါ့ ။ ငါ့အစ်ကိုကြီး ကံကောင်းမှုတွေစတင်လာပါပြီ ။ နောင်ကိုအဆင်ပြေတော့မှာပါ အစ်ကိုရေ ။
တွားပါပီ တွားပါပီ ၂ ဖစ်တွားပီ :(
အကိုတော်ဖိုးစိန် ..ဖတ်ပြီးရင်ထဲမကောင်းပါ ... ပြောချင်တာတွေများပေမယ့် ဘယ်လိုအားပေးရမယ်မသိဖြစ်သွားတယ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ကြိုးစားပါ တနေ့အကိုတော်လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်မှာပါ ...
အခုတလော ညဉ်းချင်းတွေ နားထောင်ရပါလား ဟရို့ !! ကိုဖိုးစိန်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်ဗျာ။ အလုပ်တွေ ဒီလောက်တောင် လုပ်နိုင်လို့ ။ နောက်ပြီး မိဘကျေးဇူး သိတတ်သူမို့ ပါ။ ဒီလိုလူမျိုးအတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆိုတာ တနေ့ မဟုတ် တနေ့ တော့ မလွဲမသွေ ရောက်လာမှာပါဗျာ။
ကဲ ပီတိဘဏ်က ကိုဖိုးစိန် ဘဏ်နံပါတ် xxxxx၅၂၈xxxထဲကို နေ့ တိုင်း လက်ခံတဲ့ ငွေကြေး အမျိုးအစားတွေ အားလုံး လွှဲနေပါတယ်။ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းလေတော့ ပြန်ပို့ ဦး ကိုယ့်လူ :P
အရမ်းလိမ္မာတာပဲနော် .. အကို့ရည်မှန်းချက်တွေ ဖြစ်မှာပါ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ ..
ဘ၀ အမောတွေ အမြန်ဆုံးပြေပါစေ .. ငြိမ်းချမ်းပါစေ ..
ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည်နီးနီးနေနိုင်ပါစေ ..
ချစ်သူနဲ့လည်း အမြန်ဆုံး လက်တွဲနိုင်ပါစေ ..
သေသေချာချာကို ဖတ်သွားပါတယ် ..
ဖိုက်တင်းနော် ..း)
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း မျက်ရည်ကျမတတ် ခံစားမိပါတယ်.. ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ.. အလကားအရေမရ အဖတ်မရ မိဘပိုက်ဆံ ထိုင်ဖြုန်းနေသူတွေနဲ့စာရင် ဘဝကို ရေစုန်မျော လူတွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့စာရင် အများကြီး မွန်မြတ်ပါတယ်
မေတ္တာ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - ၅၂၈ +၁၅၀၀=၂၀၂၈ လွှဲပေးလိုက်ပြီ..... ယူလိုက်နော်..
မကြီးလဲ မျက်ရည်ဝဲသွားပါတယ် မောင်လေးရေ..
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ အနာဂတ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ချက်လက်မှတ်ပေးခဲ့မယ်.. ရော့ မုန့်ဝယ်စား..း)))
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ဒါကို ဖတ်ရတာ အသိတရားတစ်ခုတော့ ရတယ် စိတ်ဓါတ်မကျအောင် ကြိုးစားပြီး နေတတ်တဲ့ဇွဲသတ္တိကို မြင်ရတယ်.. ၅၂၈၅၂၈ S$ လွဲပေးလိုက်ပါတယ်.. ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဦးနော်လည်း ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်.. ဖိုးစိန်အကြောင်းဖတ်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမကျမှန်းလည်း ပိုသိလာတယ်.. ထားပါလေ..
တူမောင် ရှေ့လျှောက် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတော့မှာပါ..
ရိုးသားတယ်.. ကြိုးစားတယ်.. လေးစားစရာကောင်းတယ်..
အဲ့.. လွှဲလိုက်တယ်နော်.. ရင်ဘတ်ထဲကနေ..
ဘ၀ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ဖြတ်ကြရမှာပဲ
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ငါတို့တွေက ယောကျာင်္းလေးတွေလေ..။
အာဝါး (ကိုရီယားဝမ်) လွှဲပေးလိုက်တယ်
ချစ်သောညီလေးအတွက်အမှတ်တ၇ပို့ လိုက်တဲ့ ကွန်မန့်ဖိုးစိန်ညည်းခြင်းမှာဘ ၀အမောတွေကိုတွေ့နေ၇တယ်ဘာလဲစိတ်ဓါတ်ကျနေပြန်တာလား အသေးမွှားတွေပါကွါလို့သဘောထားလိုက်ပါယောက် ကျားဘဲဒီလောက်တော့ ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်လေအဲဒါဘ၀ ကသင်ပေးနေတာတွေလေ တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမှန် အကန်အသိတွေမင်းရထားတယ်လို့ မြိန်ရည်ယှက်ရည် ခံယူသောက်သုံးလိုက်ပါ အခုခါးသီးခြင်းတွေက အနာဂတ်မှာမင်းလေးကိုချိုမြိန်ခြင်းတွေထိုက်ထိုက်တန်တန်ဘ၀ကပေးလာလိမ့် မယ်ဆိုတာအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ထားလိုက်ပါ အဲဒါအကိုပြောတဲ့ မင်းအတွက်စကား အကို့ ရဲ့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာက မင်းအခုလိုဘ၀ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲစွာရင်ဆိုင်တာတွေမဆုတ်မနစ်သော လုံ့ လပြုခြင်းတွေကိုသဘောကျနေမိပါတယ် တချိန်မှာ ဒါလေးတွေကမင်းဘ၀အောင်မြင်ကြီးပွါးဘို့ မလွဲဧကန် အကျိုးပြုစေမှာအမှန်ဘဲညီလေး အောင်မြင်ကြီးပွါးတဲ့ အခါ ဘ၀င်မမြင့် ဘို့ဘ၀မမေ့ုဘို့အောက်ခြေမလွတ် တွေသာမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရတာတွေသာခက်တာပါညီလေးဆိုတော့လက်ရှိဘ၀လေး ညည်းချင်း ကို ရပ်လိုက်ပါ မင်းဘ၀အနာဂတ်တွေမုချပျော်ရွှင်ရမယ် အ ခိုက်တန့် လေးနဲ့တဘ၀အတွက်ကိုလဲယူတတ်
လာဟေ့ .. ၁၅၀၀ .. ရော့လဟယ်..............
အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုး ၊ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကနေ ခွာခဲ့ကြတယ် ... အဆင်ပြေကြသူတွေလည်း ရှိသလို၊ အဆင်မပြေကြသူတွေလည်း တစ်ပုံတစ်ပင် ... အဆင်ပြေကြသူတွေအတွက် ထွေထူးပြီး ပြောစရာ အကြောင်းမရှိပေမယ့် နေရေးစားရေး .. ပြောရေးဆိုရေး .. စားရေးသောက်ရေး ... အလုပ်အကိုင်နဲ့ အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာ အခက်အခဲပေါင်း များစွာကြားထဲကနေ အံကြိတ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်၊ မိဘကျေးဇူး သိတတ်တဲ့ သားလိမ္မာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို မလွယ်ပါဘူး .... သူများတွေအတွက် ခက်ခဲတာကို ကိုဖိုးစိန် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် ၊ နာကျင်မှုပေါင်း မြောက်များစွာ ကြားက ကြံ့ကြံ့ခံ အံကြိတ်နိုင်ခဲ့တယ် ... ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ .. လေးစားပါတယ် .. (၅)မိုင်ဝေးတဲ့ ခရီးကိုအသွားအပြန် လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ... အနာဂတ်မှာ ( ၅ ) လှမ်းတည်းနဲ့ မာစီးဒီး ကားတစ်စီးရဲ့ နောက်ခန်းတံခါးဝကို လှမ်းတက်နိုင်မှာပါ ... :) Go ထား ဘရာ .... လောလောဆယ်တော့ စတာလင်ပေါင်ပေးမလို့ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေ ဈေးတက်နေတာနဲ့ သြစတြေးလျဒေါ်လာနဲ့လဲပြီး စကာင်္ပူဒေါ်လာကို တူတူပို့မယ် လုပ်တာ ဂျပန်ယန်းလည်း ပါစေချင်လို့ တရုတ်ယွမ်နဲ့ပေါင်းပြီး အိတ်ကပ်ထဲပဲ ထည့်လိုက်တယ် ... :D လောလောဆယ်တော့ ပီတိဘဏ်ထဲကို ၂၂၈ လွှဲထားလိုက်တယ် .. နောက်နေ့ ၃၀၀ လာပေးမယ် .. အကြွေးစာရင်းထဲ ၃၀၀ ရရန်ကျန်လို့ မှတ် :D
ပါစေညီလေး ချစ်ခြင်းများစွာနဲ့အကို့ ဘ၀တသက်တာ စုဆောင်းထားတဲ့၅၂၈ တွေ အေးမြတဲ့မေတ္တာတွေ သံယောဇဉ်တွေ ခင်မင်မှုတွေ အိတ်သွန်ဖါမှောက် အကုန်အစဉ် အကြွင်းမဲ့လုံးလုံ့းလျှားလျှား မြူမှုန်မျှမကျန် လွဲပေးလိုက်တယ် ကြိုက်သလိုသုံး ပြုံးရွှင်ပါစေ မင်းလေးကိုချစ်ခင်ခြင်းများစွာဖြင့် အကို့ညီလေးအားငယ်ခြင်း စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း တိုမှထာဝရကင်းဝေးနိုင်ပါစေ thondrae့့
မေတ္တာ စေတနာ ဂရုဏာ မုဒိတာ အကုန်လုံး
အိမ်သတိရရူးပြီ( အိန္ဒယ ရူပီ )လဲ လွှဲပေးလိုက်ပြီ မောင်ဖိုးစိန်ရေ ..
မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ဖိုးစိန်လေး အောင်မြင်ကြီးပွားမှာ အမှန်ဘဲနော့..
ခင်တဲ့အမ
အကိုဖိုးစိန် ..ဖတ်ပြီးရင်ထဲမကောင်းပါ .....
မေတ္တာ - ၅၂၈ လွှဲပေးလိုက်ပြီ..... ယူလိုက်နော်..
ဘယ်လို ပြောရမတုန်းဗျာ... ဒါတွေဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရစမြဲပါ.. လူတိုင်း ဒုက္ခ တွေနဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်နေရတာပါ.. အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ ဆုတောင်းပါတယ်
မျက်ရည်လည်စွာ ဖတ်သွားတယ် စိန်ရေ၊ မောင်လေးအတွက် စင်ကာပူ ဒေါ်လာလေး လွဲပေးလိုက်တယ်နော်
ကျနော်ကြိုးစားပင်ပန်း ခဲ့ရသမျှ တန်တယ်လို့ထင်ပြီး အဖေနဲ့ အမေကိုငေးရင် ကျခဲ့ရတဲ့ပီတိမျက်ရည် ... ဒီမျက်ရည်တွေ ကကျနော့်ကိုအားဖြစ်စေပြီး ဒီမျက်ရည်ကြောင့် ကျနော်ဒီမှာ ကြံ့ကြံ့ခံ နေသေးတယ် ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ဘူး
You are very very clever boy.
I send 1 lakh
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါ၏... ရှိသမျှ ပေါင်ဒေါ်လာယွမ်ယန်းများကို ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း.. အကြောင်းကြားအပ်ပါ၏.. :D
စေတနာ (စတာလင်ပေါင် 528)
ကရုဏာ (သြစတြေးလျဒေါ်လာ 528)
သံယောဇဉ် (ဂျပန်ယန်း 528)
အကြင်နာ (မြန်မာကျပ် 528 သိန်း)
ကဲ.. ညီဖိုးစိန်ရေ... အဲဒီလို ပို့ပေးတဲ့ သူတွေ အများကြီးရယ်။ ညီ့ ပီတိဘဏ်မှာ ပြည့်ရုံမက ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပါ လျှံသွားပါစေဗျာ။
အမ် လိုင်းမကောင်းလို့ရောက်လာတော့ နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီထင်တယ်
နောက်လည်း အကိုဆီက ယူရမှာဆိုတော့ပေးတော့ဘူး
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ အခါပေါင်းမနဲ့ တော့ဘူး
င့ါအစ်ကိုကလည်း တော်တော် ကြိုးစားခဲ့တာကိုး
ဖတ်ပြီး အားရှိတယ် သိလား ချစ်ကိုကြီးယောက်ဖ ရေ
တော်တာပဲလေ ဒါပေမယ့်မေ၇းနဲ့ တော့နော်
တကယ်ပဲငိုသွားတယ် ဖတ်ရင်နဲ့ မျက်ရည်ဘယ်လိုကျလာမှန်းမသိဘူး
ရီစရာလေးတွေရေးနော် အမြဲးတမ်းပျော် မြူးချင်လို့ ပါရှင့်
ဒါနဲ့ ရုရှ ရူဘယ် ကျတော့ဘယ်က လွဲ ရမလဲ...။အကို လက်ခံတဲ့ ဘဏ်စာရင်းမှာ မပါဘူးနော်...။
သူကတော့ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲရုံလေးဝဲတာ ဒီမှာတော့ဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တောက်တောက်ကျတယ် ဘ၀တူတွေပါဖိုးစိန်ရေ အားပေးလို့မတတ်ပေမယ့် ဘဏ်ထဲကိုတော့ ရှိသမျှအကုန်ပို့ပေးလိုက်တယ်နော်
မောင်လေးဖိုးစိန်ရေ ။ မကြီးလည်းစိတ်မကောင်းဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေမယ်နော် ။ ဒီလိုသိတတ်တဲ့သားမျိုး ကံကောင်းခြင်းတွေပဲရမှာပါ ။ တစ်ကယ်ကိုခံစားရပါတယ် ။
24 May 2009 at 00:39
ခုချက်ချင်းလွှဲချင်တာနဲ့ မြန်မာပြည်က ပါလာတဲ့
FEC 1500 ပို့ထားတယ်
မြန်မာပီပီ မြန်မာပြည်က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ငွေလေးကိုပဲ အိမ်ပြန်မှ တပါတည်းယူသွားတော့...
ကျန်တဲ့ ယူရိုတွေ စတာလင်ပေါင်တွေ ယန်းတွေက မြန်မာပြည်မှာ
ရော့ မနေ့က ကျန်တဲ့ အကြွေး ၃၀၀ .. :D လွှဲလိုက်ပီနော်
အဲ ကိုယ့်အလှည်မှာ စည်ပင်က သစ်ပင်မခုတ်ဖို.တော့လိုတယ် ... နောက်တာပါ
အလုပ်သွားခါနီး ဖတ်ရတာ မပြီးသေးဘူး။ ၁၅မိနစ်ပဲ ကျန်တော့တာမို့ ပြန်လာမှပဲ အိပ်ချိန်ထဲက ယူပြီး ထပ်မန့်မယ်။
ခုတော့ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ တစ်ဝက်တပြက်နဲ့ပဲ အလုပ်ကို သွားရပြီ။ =(
ဖိုးစိန်ရဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေကို မြင်သွားပါတယ်။
ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပါစေလို့ ။
ကိုဖိုးစိန်ရေ ညည်းချင်းလေး လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကိုဖော်ထုတ်ခွင့်ရသွားပါတယ်နော်။
ပီတိဘဏ်ထဲက ဘဏ်နံပါတ် xxx၅၂၈xxxx ထဲသို့လက်ခံနိုင်သလောက် ပို့ ပေးပါတယ်ဂျာ..........
ပို့ တဲ့သူများတဲ့အတွက် ဘဏ်က ဘီးစီဖြစ်နေလားမသိ
ဘကြီးက တော်တယ်နော် လေးစားတယ် ငါးမစားဘူး
ဖိုးစိန် ညီလေးရေ တောင့်ထားကွာ..
အဖြစ်ခြင်းထပ်တူမဟုတ်ပေမဲ့၊ သိပ်မကွာခြားလှတဲ့ အဖြစ် မျိုးတွေ ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးရလို့ ကိုယ်ချင်းစာတယ်ကွာ
"နင်ဒါမစားရလို့ သေသွားနိုင်လား သေနိုင်ရင်စား မသေနိုင်သေးရင် အောင့်ထား"ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့ အခါပေါင်းမရေနိုင်လောက်အောင်ကိုထပ်တူကြတယ်ကွာ။
ကိုယ်မင်းကို လွှဲပေးလိုက်နိုင်တာတော့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားဘဲ
ဖိုးစိန် က အရမ်း လိမ်မာတာပဲ..တော်လိုက်တာ..
အမေ က တော့ မွေးရကျိုးနပ်တယ် ပြောနေမှာ။
ကိုယ်တွေတောင် အသိခေါက်ခက်အဝင်နက် ဖြစ်နေတာ။
If you still want to move to Britain, contact me.
ပြန်လာလို့မန့်မယ်ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ၄၃ရောက်ရှိပြီတဲ့။ ကျနော်က နောက်ဆုံးထင်ပါရဲ့ ကိုဂျီးရာ။ ကျနော်ကတော့ ဘာမှကို လွှဲစရာ မရှိပါဘူး။ အစထဲက အကုန်ပေးထားပြီးသားမို့ပါ။ ဒါကို ကိုဂျီးဘဏ်ကို သွားကြည့်ရင် သိလိမ့်မယ်။ အဟဲ။
စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ဗျာ။ ကိုဂျီးကို ချစ်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ဒီလောက်ပေါတာ။ နော့။
စတာလင်ပေါင် (စေတနာ) လွှဲပေးလိုက်ပါသည်။
steve က စပွန်ဆာလုပ်မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလန်အမြန်လာခဲ့ ကဖိုးစိန်ရေ ...
အေးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်ချိန်က အိုက်တိုးပဂေးဆန် ရုန်းကန်ခဲ့ဖူးတာ ဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အဆင်ပြေ ပါစေဗျာ။ :)
အဆင်ပြေပါစေ အကိုရေ... အားလုံးသော ငွေအမျိုးအစားတွေ လွှဲပေးထားပါတယ်... ဖတ်၍စိတ်မကောင်းပါ
ယူဗျာ... ၅၂၈ တင်မကဘူး... အကုန်သာယူ...
ဂွတ်လပ်ခ် ဘရားသား... ရုန်းကန်နေရသူအချင်းချင်းစာနာနားလည်ပါတယ်.
ကိုဖိုးစိန် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်။ ယောကျာင်္းပဲ
ဗျာ အားမလျော့နဲ့။မှတ်ထားဦးဗျ လောကမှာ
ဘယ်ဟာမှ အလကားမရဘူး၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတောင် ဘုရားဖြစ်ဖို့ ၆နှစ်တိတိ ဒုက္ခစတိယကျင့်ခဲ့ရတယ်၊ ယုတ်စွ အဆုံးဗျာ... ထမင်းစားချင်တာတောင် ပါးစပ်မလှုပ်ပဲနဲ့ ဘယ်ရမလဲ၊ အင်အင်းပါရင်တောင်မှ မညှစ်ပဲ ဘယ်တော့မှ
အင်အင်းမထွက်ဘူးဗျ။ ဥပမာတွေ များနေပြီ
အားမလျော့နဲ့ အားလျော့တယ်ဆိုတာ လူဖျင်း၊ လူညံ့တွေ အလုပ်ဗျ မဟာဇနက္ကထုံး နှလုံးမူပြီး ဆက်သာလုပ်၊ ခုခံနေရတာ နောင်တချိန် ကောင်းစားဖို့ဆိုတာ မမေ့နဲ့
မှတ်ထားဦး လူဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲ တက်လိုက် ကျလိုက်နဲ့ မတည်မြဲဘူး။ တည်မြဲနေအောင်လုပ်ရမှာက ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ပဲ ။စိတ်ဓာတ်တော့ ဘယ်တော့မှ ကျမစေနဲ့ ကျရင်ပြန်ကောက်ထား ပျောက်သွားမှ ဘ၀ပျက်မှာဗျ။ ကြိုးစားထား ကိုယ့်လူ ပန်းတိုင်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်နဲ့
မရောက်ဘူး လွယ်နေ၇င် လူတိုင်းရောက်ကုန်တာကြာလှပေါ့ဗျာ..နော။
လုပ်စမ်းပါဟ.. ကိုယ့်လူရ ကျနော်လို ဘ၀အမောတွေကို အသောလေးတွေ အဖြစ်
တဒင်္ဂ စိတ်ချမ်းသာမှာတော့ သေချာတယ်။
နောက်ပြီး မိဘအတွက် ရည်းစူးထားတဲ့သူ
အဲဒါတော့ ယုံ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ပဲ။ တော်ပြီဗျာ ရှည်နေပြီ။ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်
မောင်လေးရေ ... ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲနော်။ မကြီးအလှည့်လည်း လာမယ်လေ။ စောင့်ကြည့်နေ
မောင်လေးရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ အရမ်းလေးစား အားကျမိပါတယ်။
ကိုဖိုးစိန်ရေ.. ဒီပို့စ်လေးကျတော့လည်း ၀မ်းနည်းတယ်ဗျ... ဖတ်ရင်းနဲ့ ဆို့တက်လာတယ်.. အစ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဘ၀ကို ရောက်ကိုရောက်မှာပါအစ်ကို.. စင်္ကပူက သံယောဇဉ်တွေရှိတယ်လေ..း)
အယ်..နာက နောက်ဆုံးဖစ်နေပြီ... ဟင့်...
ဒါနဲ့ ငွေလွဲရင် ဒီဘဏ်က အတိုးက ဘယ်လောက်ပြန်ရမှာလဲ.....အဟဲ..
ဦးဦးဖိုးချိန်...မောင်နှမတွေ ဘေးမှာ အညားချီးဖဲ ချိတယ်ရေ... ချိတ်ဒွေ မညစ်နဲ့နော်...
၀ါးးးးးးးးး နာက နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ် ၅၃ ကွ.... တီတီကွန်းလို မျိုး ကွန်မန့်တထွေးကြီး... ဟိဟိ..မိုက်တယ်....
ဒါဆို ဘလော့ကွန်မန့်မင်းသမီးက တီတီကွန်း..ဟိဟိ
ဘလော့မင်းသားလေးက ဖိုးစိန်.... ဟတ်ဟတ်...
စိတ်ဧ။်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ ဦးဦ်းရေ
မအားလို့ အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်....
ကော့မန့်ရေးထားတာ အရှည်ကြီး ပျက်သွားတယ် ရေးရပျင်းပါတယ်ဆိုဂျာ.... အားတင်းထား ချီးစား အယ်လေ ချီးယာစ်း) ကိုကြီးဖိုးပိန်က ဒီလောက်ြုမူးနေတာ စိတ်ညစ်တတ်တယ်တောင်မထင်ရပါဘူး ပျော်ပျော်နေသေခဲတဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ။